Mpianatry ny ENS : ny amin’ny CEG sy lycée ny stage | NewsMada
Mpianatry ny ENS : ny amin’ny CEG sy lycée ny stage
« Manomboka izao, misokatra ho an’ireo mpianatra ho mpampianatra ao amin’ny Ecole nationale supérieure (ENS) ny varavarana eny amin’ny Lycée sy ny CEG hanaovany fianarana asa mandritra ny fianarany », hoy ny talen’ny ENS, Ramanambelina Henriette. Afaka natao izany taorian’ny fanaovan-tsonia teo aminy sy ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Rabary Paul ny alarobia lasa teo, teny Anosy.
Taloha, azo isaina amin’ny rantsan-tanana ny sekolim-panjakana manaiky mandray mpianatra avy ao amin’ny ENS Ampefiloha hianatra asa. Manilika azy ireo ihany koa anefa ny mpampianatra izay tokony hizarana ny traikefany ho an’ireo tanora vao mianatra asa, araka ny nambaran’ity tomponandraikitra ity ihany. Ho an’ny fahazoana ny mari-pahaizana Licence manokana, misy isa omena ireo mpianatra mihitsy amin’io fiofanana momba ny asa io ary miankina amin’izay no ahazoany diplaoma na tsia.
Mamaha ny olan’ireo mpianatry ny ENS izany ny fisokafan’ny sekolim-panjakana manomboka eto. Nankasitraka ny minisitra noho ny ezaka manokana nataony ny talen’ny ENS. Mahatsapa izy fa raha te hanana kalitaom-pampianarana tsara, tsy tokony hatao tsinontsinona io fiofanana momba ny asa io.